LinkedIn ndiyo yepamusoro sosi yekudyidzana yeB2B nyanzvi munyika uye, zvine nharo, ndiyo yakanakisa chiteshi chevatengesi veB2B kugovera uye kusimudzira zvirimo. LinkedIn ikozvino yave nenhengo dzinopfuura hafu yebhirioni, iine anopfuura mamirioni makumi matanhatu evanhu-vepamusoro vanokurudzira. Hapana mubvunzo kuti muteveri wako anotevera ari paLinkedIn… ingori nyaya yekuti unovawana sei, batana navo, uye upe ruzivo rwakakwana rwavanoona kukosha mune chako chigadzirwa kana sevhisi.
Wakaona here kuti ini handina kutumidza zita rechinyorwa ichi Maitiro Ekutyaira Mimwe Inotungamira na LinkedIn? Ndiko nekuti kusakwana kweLinkedIn zvechokwadi kunoita kuti zvikonere kune nyanzvi yekutengesa kuti vawedzere zvizere chikuva chekutsvaga nekutsvaga kwavo kwavanotevera tarisiro. Iwe unogumira kune mangani mameseji aunogona kutumira mwedzi wega wega, mangani anotungamira iwe aunogona kusevha, haugone kuziva kuti ndiani akaona chimiro chako, hauna mukana kune chese chinhu chinowanikwa kuti utsvage, uye hauna mukana kune tarisiro kunze kwenetiweki yako yekukurumidza.
Pane izwi ratinoshandisa paLinkedIn patinobatana nemumwe munhu uye tobva tarova neyakagomarara, inbound yekutengesa meseji… Pitchslapped. Handina chokwadi kuti ndiani akauya neshoko, asi zviri pachinangwa chaicho. Zvakafanana nekuvhura gonhi repamberi uye mutengesi anobva angosvetuka musuwo otanga kuedza kukutengesera. Ini ndinoti "edza" nekuti kushamwaridzana kutengesa hakunei nekukanda, zviri zvekuvaka hukama uye nekupa kukosha.
Yese yakananga kushambadzira kushambadzira inoda akawanda akabata kuti apfuure kuenda kune iyo tarisiro. Tarisiro yako yakabatikana, vanogona kunge vasina bhajeti, kana vangangodaro vasina kufunga nezvekuwana chigadzirwa chako kana sevhisi. Ndicho chikonzero nei zvichikosha kuti iwe uve neyakaenzana, inofambiswa zvakanaka yekutevera chirongwa. Kana uchinge wabatana newe, tarisiro inova yekutanga-degree yekubatana, uye iri mune yako netiweki nekusingaperi, saka unovarera pamwe nekutevera uye zvemukati.
Chipenga cheCleverly chinobatana neLinkedIn kukupa iwe iri nani nzira yekugadzirisa, kuteedzera, uye kupindura kumatarisiro - kusanganisira kudzvanya-uye-kutumira matemplate ekusevha iwe maawa achipindura.